DAAWO VIDEO+SAWIRRO : Soomaalida Dalka Norway Dhistay Masjid 9 Milyan Oo Dollar Lagu Dhisay Caasimada Norway Ee Oslo Iyo Munaasibad Balaadhan Oo Lagu Furay - iftineducation.com
iftineducation.com – Munaasabadda furitaanka majidka cusub ee soomaalida ayaa waxaa ay maanta ka dhacday caasimadda dalka Norway ee Oslo, gaar ahaan xaafadda GrÃ¸nland.
Xafladda ayaa waxaa ka soo qeyb galay culumo badan iyo dadweyne aad u farabadan, waxaana masjidka oo ka kooban sadex dabaq noqday mid ay buux-dhaafiyaan dadka.Masjidkan ayaa waxaa qarash ahaan ku baxay sida ay sheegeen gudiga lacag dhan 55-milyan oo norsk kroner ah, marki doollar ahaan loo dhigana ay noqoneyso lacag 9-milyan oo dollar kor u dhaafeysa.
Halkaan Ka Daawo Muuqaalka Videoga Furitaanka Masjidka Cusub.
Mid ka mid ah culimada oo lagu magacaabo Sh. Xasan Cabdi Mursal, kana mid ah raggii u istaagay dhismaha masjidka islamarkaana ka mid ah masuuliyiinta ayaa sheegay in dadaalka masjidka uu mudo dheer soo qaatay islamarkaana gudaha iyo dibeddaba loo kaashaday.
Waxaa uu sheekhu intaa raaciyey in ugu dambeyntii Ilaahay ku guuleeyay dhameystirka masjidka oo dhismo ahaan qaatay mudo 2-sanadood ah.
Umadda Soomaaliyeed ayuu sheegay in ay masaajidkan dhisatay, kharashka iyo juhdiga ku baxayna iyagu jeebkooda ka yimid.
Ugu dambeyn Sh. Xasan ayaa ugu mahadceliyaya dhamaan umadda Soomaaliyeed intooda gacanta ka geysatay iyo inta aan ka geysanba, waxaana uu sheegay in masjidku uu maanta wixii ka dambeeyo uu u furan yahan dhamaan umadda Soomaaliyeed iyo muslimiinta oo dhan.
Halkaan Hoose Ka Daawo Sawirado Dhamestiran.
Daawo Sawirada Yaabka Badan Mooto qaab diyaarad u sameesan oo la soo saaray